Fandraisana - Politika
Fanamby goavana: ilay ho ben’ny tanànan’ny Kaominina Antananarivo renivohitra (CUA) atsy ho atsy sy ireo ho mpanolotsainan’ny tanàna dia hiloloha adidy mavesatra hamelombelona indray sy hanarina ny renivohitr’i Madagasikara izay...
« Fifampiraharahana hametrahana vidin-tsolika mirary eo amin’ny fiaraha-monina » Mba azonao ambara fohifohy aminay ve ny amin’ny fitantanana ny vidin-tsolika? Araka ny lalàna 2004-003 dia nohalalahana ny sehatry ny solitany malagasy tamin’ny...
Sahala ny zava-misy any amin’ny ankamaroan’ny firenena afrikana samihafa, mbola fanamby lehibe eo amin’ny fitantanana ara-demokratika ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy eto Madagasikara. Ao anatin’ny fiomankomanana ny amin’ny anatanterahana ny fifidianana Solombavambahoaka...
Na dia heverina aza fa latsa-danja manoloana ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny fifidianana solombavambahoaka ho avy io dia anisan’ny fotoana iray hampiasan’ny kandidà enti-manana mihoampampana, na vola io na...
« Na dia ambany aza ny tahan’ny fandraisana anjara tamin’ny fifidianana dia voafidy tamin’ny ara-drariny izahay » Anisan’ny tanan’ankavanan’i Andry Rajoelina i Christine Razanamahasoa, ary lany ho filohan’ny Antenimierampirenena izy. Voafidy mora...
Aug 20	•
Tsy azo ihodivirana ny fampiasana solika. Singa iray manan-danja tokoa ho an’ny toe-karena izy io. Misy fifanandrinana manodidina ny resaka solika amin’izao fotoana izao...
Misy sy miandry hatrany ny fanamby politika sy ara-toekarena ary ny fiovan’ny toe-java-misy eran-tany. I Madagasikara manoloana izany dia toa mizotra amin’ny lalana mitondra mankany amin’ny fiaraha-miasa eo...
Noho ireo soatoavina maha olombelona maro izay raiketany sy ny fahombiazany amin’ny fanambarana ny mpankafy amina fihetsem-po iray sy hambom-pirenena...
Fanamby goavana: ilay ho ben’ny tanànan’ny Kaominina Antananarivo renivohitra (CUA) atsy ho atsy sy ireo ho mpanolotsainan’ny tanàna dia hiloloha adidy mavesatra hamelombelona indray sy hanarina ny renivohitr’i Madagasikara izay sempotra sy tafiditra anatina vela-pandrika marobe samihafa eo an-dàlana mankany amin’ny fandrosoana. “Iainana isan’andro vaky ny fahavoazana tsy maintsy atrehina, toy ny tsy fandraofana ny fako, ny fihanaky ny mpivarotra mamelatra entana eny amoron-dalana na any anaty arabe, ny tsy fahampian’ny famatsiana rano sy jiro, ny fahasimban’ny tatatra fandehanan’ny rano maloto, sns.”, hoy ny voasoratr’i Jean Rabemanantsoa ao amin’ilay boky hoe La Cité des mille : Antananarivo, histoire, architecture, urbanisme (Ny tanànan’ny arivo: Antananarivo, tantara, taotrano, fanajariana tananàn-dehibe) .Hatramin’izao aloha dia mbola tsy misy tsy ampoizina ny fanoritsoritana ny sary mampalahelon’ilay renivohitr’i Madagasikara nataon’ity injeniera sy mpahay mari-trano ity. Saingy izy ity fotsiny dia noresahan’ny mpanoratra tamin’ny 1998. Torimaso lalina Ireo zava-niseho izay voatantara roapolo taona lasa izay dia nahazo faka amin’ny andavanandrom-piainan’ny mponina eto Antananarivo na dia mandeha hatrany aza...
Nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny fironan’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) any amin’ny fanoherana ny loholon’i Madagasikara sady sekretera jeneralin’ny antoko, Olga Ramalason. Mampanantena izy ireo fa hanao ny asa maha vatomizàna ny mpanohitra araka ny tokony ho izy amin’ny fanaraha-maso ny fomba fiasan’ny governemanta. « Diso fanantenana tanteraka izahay» Ahoana no fahitanao iny vokatra tamin’ny fifidianana ho solombavambahoaka farany teo iny? Diso fanantenana izahay tamin’ny fomba nitantanana ny zotram-pifidianana. Iaraha-mahala fa nisy ny tsy fahatomombanana sy tsy fanarahan-dalàna tamin’izany. Manaporofo izany ny fitoriana izay voarain’ny Fitsarana avo momban’ny lalàm-panorenana (HCC) izay nahatratra aman-jatony. Raha tsy hiresaka afatsy ny lisim-pifidianana isika. Mpifidy marobe voasoratra anarana tamin’ny fifidianana ho filoham-pirenena no tsy hita indray tao amin’ny lisim-pifidianana nandritra ny fifidianana ho solombavambahoaka toy ny tao amin’ny boriborintany fahadimy teto Antananarivo Renivohitra. Misy koa ireo mpifidy izay afaka nifidy im-betsaka. Izany dia mampiseho fa tsy afaka itarafana ny safidim-bahoaka velively iny fifidianana farany teo iny. Maro ihany koa ireo kandidà izay tsy...
« Fifampiraharahana hametrahana vidin-tsolika mirary eo amin’ny fiaraha-monina » Mba azonao ambara fohifohy aminay ve ny amin’ny fitantanana ny vidin-tsolika? Araka ny lalàna 2004-003 dia nohalalahana ny sehatry ny solitany malagasy tamin’ny fiantombohan’ny taona 2000. Vokatry ny fisondrotan’ny vidin-tsolika tsy an-kijanona teo amin’ny tsena anatiny anefa dia nanomboka niditra an-tsehatra teo amin’ny fitantanana ny fanjakana tamin’ny taona 2011. Izany dia notanterahana tamin’ny taona 2013 tamin’ny alalan’ny famoahana fehezan-dalàna mifehy ny vidin-tsolika eny amin’ny mpaninjara. Ny vidiny ho an’ny mpanjifa vaventy, toy ny Jirama, ny Air Madagascar, Ambatovy sns., dia fehezin’ny fifanarahana manokana sy malalaka eo amin’ny mpandraharaha ara-tsolitany sy ny mpanjifa ao amin’izy ireny. Tahaka ny ahoana sy ahoana ny firafitry ny vidin’ny solika? Aorian’ny fifampiraharahana ifanaovan’ny mpandraharaha sy ny fanjakana no ampiharina ny rafi-bidy. Ny rafi-bidy dia kajiana avy amin’ny atao hoe ‘vidiny voakajy iaingana’ (prix de références calculés, PRC) izay taratry ny tena vidiny marina. Raha refesina miohatra amin’ny politikam-panamarinam-bidy isam-bolana dia mifandanja ny elanelana misy eo amin’ny PRC sy...
Sahala ny zava-misy any amin’ny ankamaroan’ny firenena afrikana samihafa, mbola fanamby lehibe eo amin’ny fitantanana ara-demokratika ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy eto Madagasikara. Ao anatin’ny fiomankomanana ny amin’ny anatanterahana ny fifidianana Solombavambahoaka eto Madagasikara, dia fantatra tamin’ny fanambarana nataon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), fa tsy misy afa-tsy ny 15%-n’ireo kandidà milatsaka ho fidiana no vehivavy ; salanisa izay heverina fa mbola miiba amin’ny fanambanin’ny fetra tokony ho azo ekena, dia ny 30 % ary lavitry ny afo koa ny kitay ny amin’ny fanatrarana ny fampimirana lenta ao anatin’ny dingam-panatanterahana ny fifidianana. Ankoatra ny resaka salanisa, toe-javatra mbola mahavaka koa raha mifototra hatrany amin’ny firotsahana an-tsehatry ny vehivavy eo amin’ny tontolo politika ; voafetra ny maha to teny azy, na amin’ny maha kandidà na koa rehefa tonga olom-boafidy. Tsy ampy fanentanana Ady mafana hatreto ny firotsahan-kofidian’ny vehivavy, saingy mbola lala-mideza koa no diavina mandritra ny fotoam-piasana. Rehefa nametrahan’ny vahoaka fitokisana indray ka lany ho solombavambahoaka, vitsiana amin’ny andriambavilanitra no misahana...